पत्रकार महासंघले भन्यो– ‘मुलुकी ऐन संशोधन र सुधार गर्नुपर्छ’
नेपाल समाचारपत्र, ललितपुर नेपाल पत्रकार महासंघले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गोदावरी घोषणा–पत्र जारी गरेको छ । सम्पादकहरु, महासंघका पूर्वसभापति तथा
मदन भण्डारी एसियाली विद्यालयको उद्घाटन, दिगो आर्थिक विकास उच्च प्राथमिकतामा
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दिगो आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । भक्तपुरको खरिपाटीमा आज मदन भण्डारी एसियाली बिद्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले तिव्रत्तर
शैक्षिक विकासमा काङ्ग्रेसको महत्वपूर्ण योगदान छः डा. महत
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा रामशरण महतले नेपाली शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काङ्ग्रेसको महत्वपूर्ण योगदान रहेको दावी गर्नुभएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पाल्पा–काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको
जनहितमा काम भएनः नेता सिंह
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दुई तिहाइ बहुमतको अनुभूति दिलाउने गरी जनहितमा सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । जैशीदेवल युथ क्लबको रजत महोत्सवका अवसरमा
संहिता सुधार गर्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घको माग
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ का केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकाले पुनः ती
आवश्यक ऐन कानून छिट्टै बन्नेछः अध्यक्ष तिमल्सिना
बनेपा । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानून छिट्टै बन्ने बताउनुभएको छ । आज काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक
कञ्चनपुर घटनाका दोषीलाई कारवाही हुन्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुर घटनाका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नकेपा०का अध्यक्ष
संबैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनमा हस्तक्षेप हुन हुन्नः मन्त्री ढकाल
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले संबैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनमा हस्तक्षेप हुन नहुने बताउनु भएको छ । नेपाल बार एशोसियशन भक्तपुर शाखाको आतिथ्यतामा भक्तपुरमा संचालन भएको दुईदिने
गोसाइँकुण्डमा तीर्थयात्रीको भीड
रसुवा । भगवान् शङ्कर विराजमान रहनुभएको पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्डमा यही भदौ ६ गते पुत्रदा एकादशीदेखि लागेको विशेष मेला भर्न हजारौँ हजार भक्तजन आज निलाद्री पर्वत पुगेका छन् । पौराणिक कथनअनुसार
सरकारले अराजकता निम्त्याउन खोज्योः शेखर कोइराला
सरोज यादव, मोरङ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा डा. शेखर कोइरालाले सरकारले नागरिकमाथि दमन गरी अराजकता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन । मोरङको सलकपुरमा नेपाल महिला संघ क्षेत्रीय समितीले आयोजना
पर्यटन विभागद्धारा २० करोड राजश्व सङ्कलन
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामा पर्यटन विभागले रु २० करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा विभागले आव २०७४÷०७५ मा रु एक अर्ब तीन करोड सात लाख
श्रावणी स्नानका लागि बागमति घाट सफाइ
काठमाडौँ । ऋषि तर्पणी पर्वमा स्नान एवं तर्पण गर्न जाने भक्तजनलाई सहज होस् भनी बागमतिको मुहान क्षेत्रस्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिका क्षेत्रका घाट सफाइ गरिएको छ । पतञ्जलि योग समिति सुन्दरीजल र
देउखुरीमा एक महिला पछि शव फेला
दाङ । देउखुरीमा एक महिलाको शव फेला परेको छ । राप्ती गाउँपालिका–५ पहरुवास्थित दोलाइखोला किनारमा शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङले जनाएको छ । आज दिउँसो दोलाइखोला नजिक शव
एउटै कार्यक्रममा वीस पुस्तकहरुको विमोचन
ज्ञानमणि नेपाल, काठमाडौं । शब्दार्थ प्रकाशनले आज ( भदौ ९ गते ) एकै दिन एउटै कार्यक्रमका वीच २० वटा साहित्यिक पुस्तकहरुको विमोचन गरेको छ । आफ्नो १४ औं वार्षिक उत्सवका
हेटौंडा । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४, मुसेधापमा मात्र बस्दै आएका देशकै लोपोन्मुख जाति बनकरियालाई प्रदेश–३ सरकारले ब्यवस्थित घर बनाइदिने भएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शनिबार मुसेधापमा बनकरिया बस्ती अवलोकनपछि
कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा मंसिर ६ बाट महोत्सव हुने
सीताराम चौधरी, कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ५, चन्द्रौटामा आगामी मंसिर ६ गतेदेखि “पाँचौं चन्द्रौटा महोत्सव २०७५” संचालन हुने भएको छ । व्यापार संघ कपिलवस्तुले महोत्सव संचालन गर्न लागेको हो
धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावन बोकेको दुधपोखरी संरक्षणको अभावमा उपेक्षित
नेपाल समाचारपत्र, लमजुङ । लमजुङमा रहेको दुधपोखरीले धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावन बोकेको भए तापनि संरक्षणको अभावमा उपेक्षित भएको छ । ऐतिहासिक चेपे नदीको मुहान समेत रहेको सो पोखरीको संरक्षण तथा
मोना–बेनी–लभ्लीहिल पदमार्ग शिलान्यास
प्रताप बानियाँ, म्याग्दी । र्यटकीयस्थल लभ्लीहिल पुग्नका लागि पदमार्ग बनाइने भएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२, ज्यामरुककोटस्थित खबरामा रहेको लभ्लीहिल भ्रमण गर्न सदरमुकाम बेनीबजारदेखि पर्यटकीय क्षेत्र लभ्लीहिल पुग्न पक्की पदमार्ग
राजधानी र कर्मचारी चाँडै टुङ्गो लगाउः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले जनतालाई सर्वाेपरी बनाउने गरी प्राप्त लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनताकै पक्षमा काम गर्न तीन वटै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । प्रदेश
कुमारी व्यापारमा फेरी पुष्परत्न शाक्य
काठमाडौं । कुमारी पार्टी व्यापार संघको शनिबार सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारण सभाले पुष्परत्न शाक्यको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नया“ कार्यसमिति चयन गरेको छ । संघको उपाध्यक्षमा किशोर रोक्का, वीरेन्द्र शाक्य र